अर्थतन्त्रमा शुभ सङ्केत
आ.व. २०७३/७४ को आधा समय बितिसकेको छ र यो अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र ‘सबलोन्मुख’ रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औँल्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्रमा ‘सकारात्मक’ प्रभाव परिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा मौसमी अनुकूलताले धान उत्पादन वृद्धि भएको, ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सुधार र औद्योगिक कच्चापदार्थ आपूर्तिमा भएको सहजताले उत्पादन बढ्ने अनुमान यी निकायको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा केही सकारात्मक सूचक देखिएका छन् । यो अवधिमा पर्यटक आगमनमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएर सात लाख २९ हजार ५५० पुुगेकाले होटल, रेष्टुराँलगायतका क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । मौसम अनुकूलताले कृषि क्षेत्र (खासगरी धान) मा पनि सुधार आएको छ । व्यापार, यातायात लगायतका क्षेत्रमा भएको सहजताले औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात र उपयोगको वृद्धिदर उच्च छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणले गति लिएकाले निर्माण सामग्री र कामदारको माग बढेको छ । राजस्व परिचालनको स्थिति सन्तोषजनक छ र अघिल्ला केही वर्षको तुलनामा विकास खर्च बढेको छ ।
केही सूचकमा सकारात्मक रहे पनि अन्य क्षेत्रमा कमी कमजोरी प्रशस्तै छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या विगत लामो समयदेखि घट्दो क्रममा रहेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको छ । अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहनु र विप्रेषण आयको वृद्धिदर घट्दो क्रममा हुनु चिन्ताको विषय हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा १७ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आय चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा करिब छ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेकाले हो ।
राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तर सरकारी खर्च (खासगरी पुँजीगत खर्च) कम रहेकाले सरकारी बजेट बचतमा छ । यो बचत पहिलो छ महिनाको अवधिमा दुुई खर्ब १७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ रहेको छ । पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन र कर्जाप्रवाहमा असन्तुलन छ, जसको परिणाम स्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सङ्कुचित हुने सम्भावना देखिएको छ । आ.व. २०७३÷७४ को पहिलो छ महिनाको अवधिमा कुल वस्तु निर्यात झण्डै १५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ६७ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा ७४ प्रतिशतले बढेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भूकम्पको पीडा र संविधान जारी गर्ने चटारो थियो भने पछिल्लो छ महिना तराईको आन्दोलन र नाका अवरोधले सिङ्गो मुलुक नै प्रभावित भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा २७ प्रतिशतले निर्यात र २६ प्रतिशतले आयात घटेको थियो, पछिल्लो आधा समय त स्थिति झन् बिग्रियो । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, आयात निर्यातमा कमी आदि कारणले अर्थतन्त्र र विकास निर्माणबारे सोच्ने अवस्था नै रहेन ।
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष धेरै कुरामा शुुभ मान्नुपर्ने हुन्छ । राजनीति बिस्तारै सङ्लिँदै आएको छ । संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेको त छैन तर यो असन्तुष्टि राजनीतिक रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ । अघिल्ला वर्ष जस्तो बारम्बारको आन्दोलन, चक्काजामको स्थिति यो वर्षमा कम भएको छ । विनाशकारी भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको कामले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गति लिएको छ । बन्द, हडताल जस्ता गतिविधि बिस्तारै कम हुँदै गएका छन् र अर्थतन्त्र सुधारको मार्गमा अग्रसर छ ।
यी सकारात्मक पक्षको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा खुद सेवा आय बचत चार अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुुगेको छ । पर्यटन आय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएर करिब साढे २६ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ । विकास निर्माणले गति लिने आशा लिन सकिन्छ । पुँजीगत खर्च न्यून रहे पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा निकै बढीले वृद्धि भएको छ । यसका आधारमा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
न्यून आर्थिक वृद्धिदर, गरिबीको उच्चदर, कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क, न्यून विकास खर्च, स्थानीय तहमा लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहनुु, औद्योगिक वातावरणको अभाव, कमजोर भौतिक पूर्वाधार नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । ‘विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र, चुुलिँदै गएको व्यापार घाटा, कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती, महँगिदो विकास लागत’ मुलुकका चुनौती रहेको र यसले आमनेपालीको समृद्धिको चाहनालाई पर धकेलेको ठम्याई अर्थमन्त्रालयको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि साढे चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक भएका छन् । यसले अघिल्लो वर्षको एक प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा सुधार भएको सङ्केत गर्ने भए पनि विद्यमान गरिबी निवारण र मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसमा अझै सुधारको आवश्यकता छ ।
कुल बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा कम रहने र त्यसमध्ये पनि वास्तविक खर्च अत्यन्तै कम रहने अवस्थाबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन । यो एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ । विगत पाँच वर्षको औसत वास्तविक विकास खर्च १५ प्रतिशत छ र १७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । न्यून विकास खर्चको प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा धेरै रहन्छ । आयआर्जन, रोजगारीका अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गतिविधि मुलुकको विकास खर्चसँग धेरै हदसम्म सम्बन्धित हुन्छन् ।
विकास खर्चमा सुधार ल्याउन योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा होसियारी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । बजेट निर्माणमा विकास खर्च धेरै देखाउनुपर्ने सोच रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजनामा रकम विनियोजन हुने गरेको छ । विना अध्ययन योजना छनोट र रकम विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना कार्यान्वयनको चरणमा समस्या हुने गरेका छन् । योजनाको छनोटमा आवश्यकता, जनताको तत्परता, स्रोत र साधन परिचालनको सम्भाव्यता आदि पक्ष विचार नगरी नेताहरूको आग्रहमा योजना राख्ने चलन अझै कम हुन सकेको छैन । यस्ता योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउने त छँदैछ, स्रोत र साधनको दुुरूपयोग पनि बढी नै हुने गरेको छ । यसको अतिरिक्त हाम्रो विकास प्रशासनमा सुधार हुनु नितान्त आवश्यक छ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन योजनाको व्यवस्थापन र त्यसको उपलब्धिसँग जोडिनुपर्छ र यो निश्चित र स्पष्ट सूचकका आधारमा हुने र त्यसकै आधारमा कर्मचारीको बढुवा र अरू सुविधा वृद्धिको मापदण्ड बनाउनुुपर्छ ।
अर्थतन्त्रका आगामी दिन सुखद रहने सङ्केत देखिएको छ । मुलुकको राजनीति सहमति र राष्ट्रिय आवश्यकतातर्फ उन्मुख भएको छ । संविधानले तोकेको समयसीमा अर्थात् अगामी माघ ७ गतेभित्रै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पूरा हुनेतर्फ अग्रसर भएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जनताको आशङ्का वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै हटेको छ । सरकारको यो घोषणाले आगामी मङ्सिरतिर प्रादेशिक र सङ्घीय चुनाव हुने विश्वास बढेको छ । यसले राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत गर्छ, जसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक हुनेछ ।
भाषालाई जथाभाबी नबिग